DF oo dib uga laabatay go’aan ay horay uga qaadatay AL-SHABAAB | Wardoon Wardoon.net - Somali News
DF oo dib uga laabatay go’aan ay horay uga qaadatay AL-SHABAAB
Xili dhawaan DF Somalia ay warbaahinta iyo Bulshada Soomaaliyeed ku cadaadisay in Maleeshiyaadka Al-shabaab looguyeero UGUS, ayaa waxaa arrintaasi dib uga laabtay Dowlada Somalia.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah Wasiirka warfaafinta Somalia ayaa warbaahinta ka shaaciyay in DF ay dib ula laabatay go’aankii ahaa in Maleeshiyada Al-shabaab loogu yeeraayo UGUS oo loo soo gaabiyay ”Ururka Gumaadka Umadda Soomaaliyeed”.
Waxa uu Wasiirku sheegay in Dowlada Federaalka ah ee Somalia aysan qeybaha kala duwan Bulshada ku cadaadin doonin isticmaalka Erayga UGUS, waxa uuna sheegay in go’aankaasi ay dib ula laabatay Dowlada.
Go’aanka Al-shabaab loogu wanqalay UGUS, ayaa waxaa markiisii hore uu ka soo baxay Taliyaha Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Somalia Cabdiraxmaan Tuuryare kaasoo saxaafada ku amrey inay hadda kadib Maleeshiyada Al-shabaab ugu yeeraan UGUS.
Go’aanka dib ugu laabashada Dowlada Federaalka ayaa muujineysa awoodaha Maleeshiyaadka Al-shabaab, kadib markii ay Dowladu ku gacanseertay inay dhaqan galiso go’aankaasi.